Kuchena Kunoti MaLaptop Awo Haana Kukanganiswa neIntel's Dzazvino Dambudziko | Linux Vakapindwa muropa
Kushaya simba kweIntel hakuoneke kazhinji, asi zvakajairika nhasi, uye vaongorori vakawana imwe kunyanya iyo inobvumira munhu anotya kuti abvise makiyi ekuvharira kubva kune Hardware yekombuta.
Ehezve, iko kukanganisa kwekuchengeteka, kunozivikanwa pasi pekodhi CV-2019-0090, kuri kune chero munhu ane Intel processor, kunyanya sezvo kuwanda kwekushandisa pamwe nekuwanika kwenzvimbo kwakatangwa nevanorwisa kunogona kukura munguva pfupi.
Kunyaradza vatengi vako, Purism yati kuitiswa kwayo kweIntel ME hakubvumidze varwisi kushandisa kushupika uku.
"Chikonzero chekuti Hardware yedu isingatapurwe nekurwiswa uku chikonzero chimwe chete chekuti yanga isina kukuvadzwa kare. Kwekutanga nguva, isu tinodzima ese ma module kunze kwekukosha. Iyo CVE-2019-0090 kunetsekana kunorwisa akakosha ma module ayo, kana isu tikasanganisira, asi hatishandisi Intel kiyi dzakakanganiswa mukuita"Zvinotaurwa nezvePurism.
Uye izvo hazvigumire ipapo, kwete chete malaptop ane Intel kubva kuPurism anodzivirirwa, zvakare anosanganisira Mini-PC, malaptop nemaseva, ayo asiri panjodzi nekuti Purism haishandisi ma processor eIntel mavari, pamusoro pezvo, chengetedzo yakasimbiswa iyo Pureboot firmware.
Ipo maLibrem malaptop asiri anotambura, izvo hazvireve kuti ese maLinux masisitimu akachengeteka. Iyo kusagadzikana kunokanganisa zvese zvinokanganisa chero Intel system iyo isati ichangoburwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Purism inoti malaptop ayo haana kukanganiswa neIntel yekupedzisira kunetseka